पुन: लकडाउन हुने सम्भावना के छ ? यसो भन्छन् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल !
Team Khabar सोमबार, आषाढ ०८, २०७७
काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अब सोलोडोलो रुपमा लकडाउन नहुने बताएका छन्।
सुरूवाती दिनहरुमा सबैतिर एउटै किसिमको लकडाउन गरिएको भएपनि अब ठाउँ अनुसार हुने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र(सिससएमसी) निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सामान्य अवस्था नआउँदासम्म भीडभाड हुने ठाउँहरु बन्द रहने बताए।
‘अब मोडालिटी अनुसार नै लकडाउन अगाडि बढ्छ। स्कुल, सावर्जनिक यातायातहरु, सिनेमा, ठुला रेष्टुरेन्टहरु सञ्चालन हुँदैनन्। सार्वजिनक सभा समारोह पनि गर्न पाइदैन’, उनले भने,’संक्रमण भएर सोचेभन्दा भयावह ढंगले आयो भने निश्चित क्षेत्रलाई पुर्ण रुपमा सिल गर्नुपर्छ। तर पहिलाजस्तो गरी सबैतिर बन्द हुँदैन।’
सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेको भन्दापनि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेको उनले बताए।
जेठ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनको नयाँ मोडालिटी बनाएको थियो। त्यसपछि मानिसहरुको आवतजावतलाई केही खुकुलो पारिएको छ भने गतिविधिहरु पनि बढेका छन्।
गृह मन्त्रालयले ‘लकडाउन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड-२०७७’ समेत जारी गरिसकेको छ।
यातायात क्षेत्र कसरी चलाउने, उद्योग व्यवसाय कसरी चलाउने,गतिबिधिहरु कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नयाँ मोडालिटी ल्याइएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
‘हिजोकै अवस्थामा भन्दा नयाँ ढंगले जोर/बिजोर प्रणाली अनुसार सवारी साधन चलाउन भनिएको छ। अन्तर जिल्ला आवागमन हुन नदिने र प्रभावित भएका ठाउँहरु, पकेटहरु सिल गरेर लैजाने भन्ने नीति लिइएको छ’, उनले भने,’निश्चित मापदण्डका आधारमा खोलिएको हो। त्यसैले अब मानिसहरु आफैले पनि सजकता अपनाउनुपर्छ। आफ्ना गतिविधिहरु गर्दा भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्छ।’
खानपिनलाई सुधार गर्ने,व्ययाम गर्ने, स्यानिटाइजरमा ध्यान दिदै कोभिड-१९ को रोकथामका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
महामारीबाट पनि बच्नुपर्ने र सँगै भोकमरीसँग पनि जुध्नुपर्ने भएकाले यसका लागि गतिविधिहरु बढाउन मोडालिटी परिवर्तन गरिएको उनको भनाई छ।
‘मान्छे आफु पनि सचेत हुनुपर्छ। आफु सचेत नहुने हो भने यो त सरकारले खाली कर्फ्यु लगाएजस्तो मात्रै गरेर हुँदैन’, उनले भने,’मान्छेले आफै बुझ्नपर्छ। सरकारले डण्डा लगाएर भौतिक दुरी कायम हुनेत होइन। खबरदार भनेर मात्रै हुँदैन।’
सरकारले भने अनुसारको जोर/बिजोर प्रणाली पालना गर्न समेत उनको आग्रह छ।
‘मालबाहक गाडीहरु नरोक्ने र उद्योग व्यवसाय पनि निश्चित प्रोटोकल पालना गरेर चलाउन भनिएको छ’, उनले भने,’कामदारहरुलाई ल्याउने, राख्ने र लैजाने अनि स्यानिटजेसनमा ध्यान दिने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ।’
कृषि उत्पादन ल्याउने लैजाने र औद्योगिक कामहरु पहिलादेखिनै भइरहेको उनले बताए।